Home Ulo oru Europe Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko karia ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; "Dabberman". Anyị Jesse Lingard Ụmụaka Akụkọ na Iwepụ Biography Eziokwu na-ewetara gị ozi zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Ihe omumu ya bu ihe omuma ya tupu ama aha ya, ndu ezinulo ya na otutu ndi mmadu.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Jesse Jesse Lingard Biography nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Mmalite Ndụ na Ọrụ
A mụrụ Jesse Lingard na 15th December 1992 na Warrington, United Kingdom.
Ọ gara ụlọ akwụkwọ dị elu nke William Beamont nke dị n'etiti Liverpool na Manchester. Ọ bụ ebe a ka ọ na-ebu ụzọ hụ ma mepụta talent football ya dịka nwatakịrị.
Jesi toro na-eme egwuregwu na ụlọ akwụkwọ. N'oge ahụ, ọ bụ onye na-egbuke egbuke na nke kachasị mma maka ụmụaka. E weere ya inwe ikike na nkà dị ukwuu. Nne na nna ya ji nkwanye obi mee ihe site na ịbanye na Penketh United Academy. Ha mechara weghachite ya na Manchester United Academy mgbe ọ mụtara ihe ndị dị mkpa nke na-agba bọl site na ụlọ akwụkwọ ochie ya.
Jesse jikọtara ụlọ akwụkwọ na-eto eto nke Manchester United mgbe ọ dị afọ asaa ma nwee ọganihu n'oge ọgbọ. A maara ya dịka nwatakịrị na obi nwere obi ike.
Jesse Lingard mere nke ọma n'ihi na ọ na-ele ọtụtụ Andres Iniesta obere vidiyo mgbe ọ na-etolite. Nke a nyeere ya aka ịrụ ọrụ nke ọma dị ka ịkwalite nkwalite n'oge ọ bụ nwata. Obi ike nke obere obi mara nke ọma n'oge ọ bụ nwata na-arụ ọrụ dịka onye kasị nta egwu ga-eme ka ndị ntorobịa nọ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa.
Ya, ya na Paul Pogba bụ akụkụ nke ndị òtù Manchester United nke meriri ihe ngosi 2010-11 FA nke Ndị Ntorobịa na Manchester United Academy.
Jesse Lingard: Oge ntorobịa na Paul Pogba na Enyi
Ọrụ ya na mmeri ahụ nyere ya otu nkwekọrịta ọkachamara na United n'oge okpomọkụ nke 2011. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu ugbu a bụ akụkọ ihe mere eme.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ndụ Ezinụlọ
Site na ihe o yiri, Jesse Lingard sitere n 'ugbua nke ezin ul o. Nne na nna ya, nke a maara dị ka Mr na Mrs Lingard amaghị maka mgbasa ozi ha, karịa, na-enye ndị mgbasa ozi aka na ngalaba ha. Akụkọ na-egosi na Jesi na-ahapụ nna ya na nne ya ọtụtụ oge ndụ ya. Nke a mere ka o tinyere aka na egwuregwu football nke United ya.
Otú ọ dị, mama Jesin Lingard ekpughelarị onye United United fancied dị ka nwata.
Nke a mere mgbe Jesi kewapụrụ na Q & A n'ihu nke Ụbọchị Mbụ nke mbụ.
Celebrities Jennifer Aniston, Angelina Jolie na Jennifer Lopez na-abụkarị n'etiti aha e nyere.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ndụ mmekọrịta
Nwunye nwanyị mbụ nke Manchester United, bụ Jesse Lingard, agbawawo ya maka inye ya akpụkpọ ụkwụ (tụfuo ya) mgbe ọ kụrụ nnukwu oge ma ghọọ nnukwu nwa.
Emma Hyde kwuru na o chere na ndị na-agba ọsọ bụ ịhụnanya maka ndụ ya. O kwuru na ọ kwụsịrị ọrụ ya iji nyere ya aka site na mmerụ ahụ o nwere n'oge ọ bụ nwata.
Emma Hyde kwukwara na ọ kwụrụ ụgwọ ya wee tinye ndụ ya ruo afọ ise iji nyere ya aka mgbe ọ bụ onye na-egwu egwuregwu agụghị akwụkwọ.
Ọ gwara pals na mgbe Jesse bido na-afụ ụfụ na mmekọrịta ha, a manyere ya ịkwụsị ụlọ ọ kwụrụ ụgwọ maka ya. Ọ na-azọrọ na ọ bụ ụgbọala nwere okomoko nke mere ka ọ nwụọ, ya enwekwaghị ike ịbanye n'ụlọ nkwari egwu Manchester mgbe Jesi nọ.
Otu n'ime ya kwuru, sị: "Emma kpọtụrụ ndị uweojii mana a gwara ya na ọ bụ Jesi ka ụgbọ ala ahụ wee were ya, n'ihi ya ọ dịghị ohi. O juru ya anya na Jesse nwere ike inye obi ya ka o wepuo ugboala ya. "
Emma kwuru ...: "Echere m na anyị ga-alụ. Echere m na Jesse bụ otu. Enwere m oge kasị njọ ná ndụ m. Enweghị m ike ikwere na eribiri m ọtụtụ afọ naanị ka ọ tụfuo m mgbe ọ malitere ịme ego. "
Emma, ​​bụ onye nọgidesiri ike, nwere olileanya na ọ ga-eme ka ya na ya dịghachi mgbe onye ọkpụkpọ ahụ lọghachitere njem si n'oge Miami. Ọ na-agwakarị ya ka Jesi gwa ya ọzọ. Mana mgbe o mechara mee ka o gosi ya kaadị uhie - na ihe ndị e kwuru na ya gbanwere. Nke ahụ bụ njedebe ikpeazụ. Jesse na-enyo enyo n'oge niile.
Otu enyi kwuru na nso nso a: "Emma chọrọ ka ndị mmadụ mara na ọ dịghị edo-digger. Ọ bụ ya kwadoro ya ruo ọtụtụ afọ. Jesi nọrọ n'ụlọ Emma na Sale, ọ bụ onye nchịkwa na-elekọta ndị ahịa ma na-akwụ ụgwọ ụlọ ahụ n'ụlọ ha. Oge a bụ oge Jesi nwetara ego ego site na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ".
Edinson Cavani, Raheem Sterling, Karim Benzema nwere ahụmahụ dị mgbagwoju anya dịka Lingard.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ronaldo amachapụtara ya
Cristiano Ronaldo ọ bụghị mgbe niile na superstar ọ bụ ugbu a. Ma ọ bụ mgbe niile na nkà ma na-akọrọ ya ndụmọdụ n'oge ya oge na Manchester United. Foto dị n'okpuru ebe a na-ekpughe na Ronaldo kụziri Lingard ozugbo. Ajụjụ kachasị bụ; Enwerela akara ngosi Portuguese na onye England?
Ewere foto dị na 2003. Lelee vidiyo n'okpuru;
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ụgbọala ya
A hụrụ Lingard ka ọ na-amanye n'ime Bentley Continental GT ọhụrụ.
Onye na-enwe mmasị na-enwekwa £ 120,000 Range Rover Sport na nchịkọta ya. Ogologo biara na omenala. Otu n'ime ihe osise dị n'okpuru ebe a na - egosi Jesi ka ọ ghara ịchọta oge iji saa nchara Range Rover.
O tinyekwara £ 80,000 Mercedes C63S AMG na nchịkọta ya. Mmadụ atọ ahụ na-anya isi ihe ndị ahụ.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Onye Ndu Dab
Jesse Lingard wetara agba egwú 'dab' n'ime egwuregwu Bekee na mbido mgbaru ọsọ mbụ ya na St James Park na January, 2016. Lelee foto N'okpuru ebe a;
Osisi ya bụ mbubata site n'aka United States ma kwupụta ya na otu ìgwè rap na Atlanta nke a na-akpọ Migos, ọ bụ ezie na ọ bụ nanị ọdịda nke ọdịnala America mgbe Carolina Panthers quarterback Cam Newton malitere ime ya n'oge ọ bụla akụkụ ya metụrụ aka na NFL.
Kemgbe ahụ, ọtụtụ ntụrụndụ ndị America na-agụnye akụkọ ntụrụndụ bụ LeBron James. Ọbụna Hillary Clinton, onye nwere ike ịbụ onye isi oche nke United States, gbalịrị ịgba egwú n'oge ngosi telivishọn.
Ọ bụ Pọl Pogba bụ onye na-emepụta ihe dị na Serie A na Juventus ma nke a bụ otú Jesi si hụ mbụ.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Ihe mere ọ na-ejide Ee: 14
Anyị na-eche na ọ dị oke ọnụọgụgụ. N'ụzọ doro anya, [onye bụbu onye na-awakpo Arsenal] Thierry Henry nwere ya ma ghọọ nnukwu ọgụgụ na football. Ọ na-ele anya Andres Iniesta vidiyo ma Thierry Henry bụ n'ezie arụsị ya.
Jesse Lingard Idol
"Ọ bụ ezigbo ihe mgbakwunye mgbe m bụ nwata" ka Jesi kwuru. "M na-elegara ya anya ma na-ele ọtụtụ n'ime ihe mgbaru ọsọ ya anya wee chee na '14' bụ nọmba dị mma" Jesse na-akwado.
Jesse Lingard Nwa akwukwo akuko nke oma na -Naanị Onye Nzọpụta
Na 2011, òtù ndị ntorobịa nke Manchester United gosipụtara mmasị nke Paul Pogba, onye Ravel Morrison, bụ Michael Keane na Tyler Blackett dị elu.
Bia ọganihu 2016 FA Cup, Lingard bụ naanị otu so n'òtù ndị ahụ nọrọ na United Squad ruo ụbọchị ederede.
A na-ewere Jesse na ọ bụ nwa ndụ ikpeazụ nke 2011 / 2011 Manchester United Òtù Ndị Ntorobịa.
Ezomide magburu onwe ya Disemba 15, 2018 Na 2: 56 am
Lingard bụ ezigbo ọkpọ na m hụrụ ya n'anya.